Inyaniso Ngobugqi Nengqiqo Yokholo | HuffPost South Africa
13/04/2017 18:06 SAST | Updated 14/04/2017 10:45 SAST
Inyaniso Ngobugqi Nengqiqo Yokholo
Singumzi kaPhalo siyayazi ukuba izinto zomthonyama zisuka kude kwaye zohluka-hlukene, ndithi mandihlomle kulo mba kuleMpela veki yePasika.
Ndikhulele kwikhaya lwenkonzo mna, uMakhulu wami uMaMvandaba, ucawa emaNgqineni kaYehova, ngoko ke sonke ekhaya sikhulele khona. Omnye nomnye apha ekukhuleni kwakhe wazikhethela eyakhe indlela, abanye basakhonza, abanye babona ukuthi kungangcono ukuba bazikhethele indlela yabo balandele inkonzo yomthonyama.
Njengomzi kaPhalo, siyayazi ukuba izinto zomthonyama zisuka kude kwaye zohluka-hlukene, ngoku ndisisizukulwana sezizukulwana ndithi nam mandihlomle kulo mba njenokuba sizongena kwiMpela veki yePasika. KuneNcwadi endayifundayo ethi African Traditional Religion xana inabisa ngalomba ithi: "Ungathelwa nqa eAfrika ukuba unokubuza enoba bukho okanye abukho kusini na ubugqwirha, kuba zonke iindidi zabantu baseAfrika zikugqala ukuthakatha njengento ebaluleke kakhulu."
Iye yandinikela umdla leNcwadi kuba ke kudala ndihleli ndizibuza ukuba kutheni na xana umntu elandela endlela eyahanjwa ngooKhokho nabantu abadala kuthiwe yindlela ekungafanelanga ukuba siyayihamba? EAfrika kukho inkolelo edumileyo yokuba kukho amandla athile angaqondakaliyo omoya. Mna ndikhule kusithiwa oomoya kunye nezinyanya azinako ukuwasebenzisa. Kodwa apha ekukhuleni ndibonile ukuba kukho abantu abanyangayo kwaye bangamaKrestu.
Yaye bakho nabantu abakwaziyo ukufikelela kuyo lemimoya baze bayisebenzise. Umbuzo ohamba phambili ngulona othi, ingaba lemimoya isetyenziselwa injongo entle (ubugqi) okanye embi (ukuthakatha) na? Kukho ingoma kaThandiswa Mazwai eyibekayo indaba yokulungisa ingxubakaxaka ekhoyo ngaphandle kweBokwe - lonto ithetha ukuba ingasombululwa kungaphalazwanga igazi.
Kuthiwa ubugqi bona buyakhusela ebubini, lonto ithetha ukuba akunako ukuba yinto embi xana kunjalo. Aba bantu bafihla izinto abakholelwa ukuba zinamandla okubakhusela emakhayeni abo okanye eyadini zabo.
Iintsomi ezinobugqi zisinika ukholo lokuba siwathembe amaphupho ethu neminqweno yethu ingafezeka. Sithi sizakuyibona njani imilingo ezimpilweni zethu ukuba asifundanga ngobuqgi kwimbali yethu. UMakhulu umi kweli lithi asinako ukunqula abanye oothixo, nguYesu Krestu yedwa uMkhululi noMhlanguli wethu. Izinyanya zethu zisikhusela ezintweni ezinintsi, ndikholwa ngeli lithi ukuba andihambi ndedwa, ooMakhulu nooKhokho bami bahamba nami, yilento xana ubiza iziduko zakowenu, uyangxegxeza ubonga abantu bakowenu ngokukukhusela bakuthwale imihla nezolo.
Into endiyiqhapheleyo mna yilena yokuba kukho ubuxoki nenkohliso phakathi kwethu malunga nezinto zomthonyama. Ekugqibeleni noba siyafuna okanye asifuni, sonke siyazinqula; izinyanya, yeka nje wena ba ezinye zisebhayibhileni ezinye zingekho kuyo.
NgokwakwaXhosa siyazi ukuba abantu bayathwetyulwa, siyayazi ukuba bayaporha, kuxomekeka kwindlela umntu asweleke ngayo. Kwaye siyayazi ukuba izinyanya yinto ekhoyo, nokuba uyazinqula okanye awuzinquli.
Eyona nto endizama ukuyitsho ke yilena yokuba xa unezinyanya zobuKrestu lonto ayithethi ukuba zingcono kunezinyanya zomthonyama, lonto ke ithetha ukuba, masingagxekani kuba sonke siyazinqula izinyanya qha ngeendlela ezahlukeneyo, namasiko la siyawenza qha ngendlela ezahlukeneyo. Ecaweni kutyiwa umthendeleko, emisebenzini yesintu kuyaxhelwa kuphalazwe igazi. ENkonzweni kuyathandazwa, ngokwesintu siyazithutha phambi kokuba sithethe nezinyanya zethu.
Mna ndinguNokuzola, ndizalwa nguZola, ozalwa nguKholisana, ozalwa nguBhaskiti, ozalwa nguQobongwane. NdingumaMtshonyane, uChungwa, Dikiza, Sawu, Nkomo uMthuzimele geqe! Umntu wenjenje xana equla kwedini.
Ndivala ngeli lithi, zininzi impawu umtu abanazo ngokohlukana kwazo. Ukuba uthi zafa kudala kwaye akhonto ziyivayo, yiyiphi le ngqiniseko onayo yokuba xana uthandaza, umthandazo wakho uyavakala na?
MORE: ancestors easter South Africa Faith spritituality traditions Voices